Iray andro dia rava ny anganom-pahamarinan-toeran’i Kazakhstan, mitaintaina ny mpifanolo-bodirindrina aminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2022 5:43 GMT
Pikantsary tamin'ny fantsona Youtube an'ny France24 mampiseho polisy mifanandrina amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ao Almaty.
Ao amin'ny sarintanin'i Azia Afovoany, manana toerana lehibe i Kazakhstan. Tsy vitany hoe izy no firenena faha-9 midadasika indrindra maneran-tany, fa manana ny lazany amin'ny maha faritry ny fiarahamonina marin-toerana sy manankarena ihany koa izy, manana loharanon-karena lehibe amin'ny etona voajanahary sy solika, sy mponina isan-karazany sy nahita fianarana.
Saingy tamin'ny 5 Janoary, taorian'ny fihetsiketsehana nateraky ny fiakaran'ny vidin'ny etona solitany, izay fampiasan'ny maro hampandeha ny fiarany, nandroaka ny governemantany ny firenena, nanakatona ny aterineto, ary nametraka tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina tao amin'ny firenena. Nopotehin'ny vahoaka na nobodoin'ny vahoaka ny tranoben'ny governemanta, eny fa na dia ny seranan-tsambo tao Almaty aza, seranan-tsambo fidirana lehibe ao amin'ny renivohiny teo aloha sady tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Nihozongozona tao anatin'ny 24 ora latsaka ny hevitra hoe firenena marin-toerana izy.
Na dia eo aza ny ezaky ny governemanta hametraka fahatapahana tanteraka amin'ny fivezivezen'ny vaovao, anisan'izany ireo horonan-tsary mampihoro-koditra mampiseho herisetra an-dalambe, fifandonana teo amin'ny polisy sy ny miaramila ary ny mpanao fihetsiketsehana, dia mbola niely nanerana ny firenena sy manerana izao tontolo izao ihany ny vaovao.
Sarotra indraindray ny manamarina ireo horonan-tsary aparitaka amin'ny media sosialy saingy mampiseho mazava ny firodanan'ny ampahan'ny fahefam-panjakana, ny fakàna an-keriny sy ny fahapotehan'ny ampahany amin'ireo tranoben'ny governemanta ary amin'ny ankapobeny sy indrindra indrindra, ny tsy fahombiazan'ny governemanta Kazakhstaney hamaly sy hiditra amin'ny fifanakalozan-kevitra manan-danja miaraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Lasa loharanom-baovao voalohany momba ny hetsika ny media sosialy satria tsy mitantara ny fihetsiketsehana ny haino aman-jerim-panjakana, ary tranonkalam-baovao tsy miankina maro toa ny Vlast.kz no nakatona nandritra ny tontolo andro. Ny sampam-baovao iraisam-pirenena sy ny famoahana manokana toy ny Eurasianet mpiara-miombon'antoka amin'ny Global Voices no manana fahafahana mitatitra manerana an'i Kazakhstan, saingy mbola sarotra ny manamarina ny vaovao, anisan'izany ohatra ny tantaran'ny polisy miandany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny faritra sy tanàna maromaro, araka ny tatitry ny fantsona Telegram KazTAG.
Tsy dia fahita firy mihitsy ny fihetsiketsehana miely patrana ao Kazakhstan, saingy avy amin'ny faritra rehetra ao amin'ny firenena ireo sary sy vaovaon'ny fihetsiketsehana sy ny fanafihana ny saimbôlin'ny governemanta toy izany ary tsy voafetra any atsimo andrefana izay nanombohan'ny fihetsiketsehana voalohany tamin'ny 2 Janoary.
Raha nifandraika mivantana tamin'ny fisondrotry ny vidin'ny solika ny fihetsiketsehana tany am-boalohany, solika izay ampiasaina indrindra ho an'ny fiara any atsimo andrefan'ny firenena ny ankamaroany, dia nivadika politika haingana ireo teny filamatra, mitaky ny hisian'ny fitarihana sy ny fanovana rafitra manoloana ny firongatry ny kolikoly ny tsy fisian’ny rafitra misy antoko maro ary ny fifidianana malalaka sy madio.
Mifototra amin'izay hita sy izay nohadihadiana hatramin’izao, toa tena malaza tokoa ny fihetsiketsehana, ary tsy manana mpitarika mazava. Mampiseho vokatra tsy azo antoka ho an'ny fihetsiketsehana ity tsy fahampian'ny fitarihana ity. Vitan'ny fitondrana notarihan'i Nursultan Nazarbayev hatramin'ny andro niafaran'ny Firaisana Sovietika tamin'ny faramparan'ny taona 1980 ny nanafoana ny ankamaroan'ny karazana fiainana ara-politika hafa, ny haino aman-jery mahaleo tena tokoa na ny fiarahamonim-pirenena mitsikera ny fitondrana ara-politika ankehitriny. Nidera an'i Nazarbayev ho iray amin'ireo mpitarika vitsivitsy nahavita nihazona ny fitoniana tao amin'ny fireneny ireo mpitarika ao amin'ny faritra. Nijanona teo amin'ny fitondrana nandritra ny 30 taona teo ho eo izy ary nametra-pialana tamin'ny volana Martsa 2019 saingy nitazona ny fahefana ho filohan'ny Filankevi-piarovan'i Kazakhstan, mandra-pandroahana azy androany, niaraka tamin'ny praiminisitra sy ny kabinetra. Milaza ny tsaho fa mety handao ny firenena i Nazarbayev.
Tsy mbola nanolotra solontena mazava ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanomboka fifampiresahana amin'ny mpitondra Kazakhstaney ankehitriny. Miely patrana ny herisetra an-dalambe, ary mbola tsy fantatra mazava hoe iza no ao ambadik’izany hetsika izany, na mety ho ireo mpanao fihetsiketsehana, na mpandroba manararaotra manao halatra sy fandravana.
Hatairana tao amin'ireo firenena manodidina
Raha miaina zavatra tsy mbola nisy toy izany aza ny Kazakhstaney, mijery amim-panahiana kosa ireo firenena manodidina satria efa ela izy ireo no nihevitra an'i Kazakhstan ho mariky ny fitoniana ara-politika.
Niaina korontana ara-politika matetika, herisetra an-dalambe ary famonoana feno habibiana an'ireo filohany telo i Kyrgyzstan, mpifanolo-bodirindrina aminy any atsimo. Matetika nanao fihetsika patriarika ny manam-pahefana ao Kazakhstan, manamarika ny mpifanolo-bodirindrina aminy kely kokoa ho loharanon'ny tsy fandriam-pahalemana maharitra sy fanjakana tsy nahomby, kanefa dia nahazo fanampiana avy amin'i Bishkek izy ireo ankehitriny.
Ho an'i Shina, mampatahotra ny toe-draharaha satria mpilalao fototra ao amin'ny lalantsara Belt and Road Initiative i Kazakhstan, ary mpamatsy lehibe amin'ny etona sy solika. Sokajiana ho naman'i Beijing ny filoha Kazakhstaney ankehitriny Kassym-Jomart Tokayev ary mahafehy tsara ny teny Shinoa Mandarin. Ny mpanohitra foko Kazakh, kosa na izany aza, dia fantatra amin'ny lahateniny tsy tia Shinoa. Mety hitarika amin'ny fahapotehan'ny orinasa Shinoa, toy ny efa niainana tamin'ny toe-draharaha mitovy amin'izany tany Kyrgyzstan ny herisetra an-dalambe.
Raha ny fitantarana, tsy miresaka momba ny korontana ny gazety People's Daily amin'ny teny Kazakh, gazety mamolavola ny tsipika ofisialin'ny governemanta Shinoa, ary tsy nizara afa-tsy izay fanambarana avy amin'i Tokayev momba ny fialan'ny governemantany.
Mety hijery akaiky ny toe-draharaha ihany koa i Moskoa. Ao anatin'ny ady amin'i Okraina i Rosia amin'izao fotoana izao, vokatry ny Revolisiona Laoranjy 2004-2005 sy ny fihetsiketsehana Euromaidan 2013 izay nahitana mpanao fihetsiketsehana nanongana ny governemanta Okrainiana noho ny antony mitovy amin'ireo izay mihatra amin'i Kazakhstan ankehitriny: kolikoly, elanelana mitombo eo amin'ireo sangany sy ny olom-pirenena antonony, ary tsy fahampian'ny haino aman-jery mahaleo tena. Nanararaotra ny zava-nitranga tao Okraina i Putin ao Rosia mba hilazana azy ireo ho ohatra mampidi-doza mety hisy fiantraikany amin'i Rosia, manome azy fiarovana amin'ny lahateny mba hanafika sy hanakambanana an'i Crimea tamin'ny 2014 ary manentana sy mamatsy vola ny ady any atsinanan'i Okraina. Amin'izao fotoana izao i Rosia dia nanangona miaramila Rosiana maherin'ny 100.000 eo amin'ny sisin-taniny miaraka amin'i Okraina. Mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitr'i Rosia ny fivoarana ao Kazakhstan na hanamafy ny fibodoana misy ao amin'ny faritany Okrainiana, na hanafika faritra hafa ao amin'ny firenena.
Tamin'ny faran'ny 5 Novambra, nitodika tany amin'ny Fikambanan'ny Fifanarahana momba ny Fiarovana Iombonana – Collective Security Treaty Organization (CSTO) i Jomart-Tokaev mba hahazo fanampiana. Ny CSTO dia fiaraha-miombon'antoka ara-tafika avy amin'i Rosia, Belarosia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan ary Tadjikistan izay manome fifanohanana sy manao fanazaran-tena ara-tafika iraisana.
Araka ny nosoratan'i Dosym Saptayev, mpaneho hevitra ara-politika Kazakh tao amin'ny kaontiny Instagram:
Nangataka fanampiana ara-tafika tamin'ireo mpikambana ao amin'ny CSTO i Tokaev mba hametraka filaminana ao amin'ny fireneny, ka nanao dingana voalohany amin'ny fahaverezan'ny fiandrianam-pirenena. Tsy vitan'ny hoe naneho ny fahalemeny sy ny tsy fahombiazan'ny governemanta Kazakh izy, fa lasa mpitrosa amin'i Rosia ankehitriny.
Araka ny filazan'ny masoivohom-baovao TASS ao Rosia, efa nanome fankatoavana ny CSTO mba handefa tafika mpampandry tany any Kazakhstan.